Masuuliyiinta dalalka Midawga Yurub oo meel adag ka istaagay arrinta Turkiga - BBC News Somali
Masuuliyiinta dalalka Midawga Yurub oo meel adag ka istaagay arrinta Turkiga
Image caption Taageerayaasha madaxweyne Erdogan ee dalka Netherlands ku sugan
Dalal badan oo ka tirsan Midawga Yurub ayaa meel adag ka istaagay muranka kala dhexeeya Turkiga ee ku aadan dadaalada ay Ankara ku doonayso in ay isu soo baxyo siyaasadeed ku qabato dibadda.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jermalka Thomas de Maiziere ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo ol'oleyaasha ay wasiirada Turkigu ku bartilmaameedsanayaan qurbajoogta Jermalka ku sugan.
Ra'iisal wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa madaxweynaha Erdogan-ka Turkiga ka dalbaday in uu raaali gelin ka bixiyo in uu dadka Netherlands ku tilmaamay Nazi-gii, ka dib markii wasiir Turki ah laga hor istaagay in ay ka qaybgasho isu soo bax lagu qabtay Netherlands.
Image caption Madaxweyne Erdogan waxa uu doonayaa in uu helo awood badan
Denmark ayaa sidoo kale dib u dhigtay uu Ra'iisal wasaaraha Turkigu ku tagi lahaa dalkooda, Jermalkuna wuxuuba ka digayaa in ay hadda adkaan doonto in laga xaajoodo gargaarka Turkiga la siiyo.
Kaya ayaa waxa ay booliska dalkaasi geeyeen xudduudda Netherlands ay la wadaagto Jarmalka, sida uu xaqiijiyay ra'iisalwasaaraha Netherlands Mark Rutte.
Image caption Fatma Betul Kaya Sayan ayaa Twitter-keeda ku soo gudbinaysay xogta ku soo saabsan musaafuriskeeda.
Image caption Qiyaastii 1,000 qof oo dibadbaxyo dhigaya ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee qunsuliyadda Turkiga ku leeyahay Rotterdam
Ra'iisalwasaaraha Netherlands ayaa sheegay in ay adkaatay in xal laga gaaro murankaasi diblomaasiyadeed ee u dahxeeya dalkiisa iyo Turkiga, waxa uuna mas'uuliyad xummo ku tilmaamay booqashada wasiirka arrimaha qoyska ee Turkiga.
Madaxweyne Erdogan ayaa xukuumadda Netherlands ku tilmaamay "haraadigii Naasiyiinta" bacdamaa ay is hor taageen booqashadii wasiirkiisa arrimaha dibadda.
Madaxweynaha ayaa haddii uu aftidan ku guuleysto waxa uu awood u yeelanayaa in uu soo magacaabo xubnaha garsooreyaasha maxkamadaha iyo in uu soo saaro sharci ku saleysan awood madaxweyne.
Sidoo kale madaxweyne Erdogan ayaa awood u yeelanayo in uu kala diro baarlamaanka isla markaana uu dalka geliyo xaalad deg deg ah. Sidaa awgeed, ayuu Erdogan waxa uu hadda u baahan yahay codadka 5.5 milyan oo qof oo qurbo joog ah basle xaq u leh in ay codkooda ka dhiibtaan aftidan loo qaadayo dastuurka dalkaasi.
In kastoo dowladda Netherlands ay sheegtay in arrimo ammaan ay u joojisay isu soo baxyada taageerayaasha madaxweyne Erdogan, haddana xaqiiqada jirta ayaa ah in kooxa diidan islaamku ay soo dhaweynta Erdogan iyo wasiiradiisa uga faa'iideysan karaan doorashada soo socota.